Akwukwo akwa, Mpempe akwụkwọ acrylic, China Fabric, Ndị na-emepụta mpempe akwụkwọ na-egbuke egbuke, ndị na-ebubata, Ụlọ ọrụ - Jumei Acrylic Manufacturing Co., Ltd.
>lọ>Product>Fabric, Ewute acryli mpempe akwụkwọ
Enwere ike ịcha akwa akwa acrylic, gwuo ya, chụtuo, ịkpụ laser, glued, kpụrụ, stampụ ọkụ na silk dị ka akwụkwọ acrylic ọkọlọtọ ọ bụla ọzọ. Ọ dịkwa mma na ngwa ndị na-achọ ngwaahịa acrylic ndị ọzọ ka a na-ejikọta ya na akwa akwa na-enweghị mkpa maka ngwa ngwa ma ọ bụ ihe nkwụnye mgbagwoju anya.
Mpempe akwụkwọ a pụrụ iche nwere flakes na-egbuke egbuke agbakwunyere ozugbo na ngwa ahụ. Ọ dị mma maka ọrụ okike ndị ahụ na-achọ atụmatụ na-adọrọ adọrọ anya.
Rịba ama na ụkpụrụ na nkwụsi ike nke ihe na-egbuke egbuke ga-adịgasị iche site na mpempe akwụkwọ gaa na mpempe akwụkwọ. Enwere ike ịnwe ntakịrị ezughị okè n'elu. A naghị ele ihe ndị a anya dị ka ntụpọ ma bụrụ nsonaazụ nke usoro mmepụta ihe achọrọ iji mee mpempe akwụkwọ ndị a.
◇ Mpempe akwụkwọ acrylic ákwà, mpempe akwụkwọ acrylic na-egbuke egbuke
Mpempe akwụkwọ acrylic ákwà, mpempe akwụkwọ acrylic na-egbuke egbuke
100% Mitsubishi na-amaghị nwoke
Ahụmịhe nrụpụta afọ 15
Ebupụlarị ya n'ihe karịrị mba iri itoolu
Ga-enyere gị aka ịgbasa ahịa nke ọma.
ihe onwunwe 100% Mitsubishi na-amaghị nwoke
ọkpụrụkpụ 2.8mm, 3mm, 3.5mm, 4mm
Agba Ọlaọcha, ọla edo, ọbara ọbara, odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ wdg ụdị ụkpụrụ niile
Ọkwa ọkọlọtọ 1220 * 1830, 1220 * 2440mm
MOQ Ibé akwụkwọ 18 nke ọkpụrụkpụ / agba / nha ọ bụla
◇ Enwere ike ịkpụ akwa acrylic, gwuo ya, kpụọ, ịkpụ laser, glued, guzobe, stampụ ọkụ na silk dị ka nke ọ bụla ọzọ.
ọkọlọtọ acrylic mpempe akwụkwọ. Ọ dịkwa mma na ngwa na-achọ ngwaahịa acrylic ndị ọzọ ka a na-ejikọta ya na nke
ákwà na-enweghị mkpa maka n'ibu fasteners ma ọ bụ mgbagwoju adhesives.
◇ Mpempe akwụkwọ a pụrụ iche nwere flakes na-egbuke egbuke nke etinyere ozugbo na ihe ahụ. Ọ dị mma maka ọrụ okike ndị ahụ na-achọ ịma mma
atụmatụ na-adọrọ adọrọ anya.
◇ Rịba ama na ụkpụrụ na ịdịgidesi ike nke ihe na-egbuke egbuke ga-adịgasị iche site na mpempe akwụkwọ gaa na mpempe akwụkwọ. Enwere ike inwe ntakịrị elu
ezughị okè. A naghị ele ihe ndị a anya dị ka ntụpọ ma bụrụ nsonaazụ nke usoro mmepụta ihe achọrọ iji mee mpempe akwụkwọ ndị a.
Product Mpempe akwụkwọ acrylic na-egbuke egbuke, mpempe akwụkwọ na-egbuke egbuke
Agba Ọlaọcha na-egbuke egbuke, ọla edo na-egbukepụ egbukepụ, akwa ọla ọcha nwere ụkpụrụ, akwa akwa
atụmatụ Agba mara mma; Iguzogide ihu igwe; Ikike usoro dị mma; Na-adịghị egbu egbu; Ihe mgbochi mmiri; Eco-enyi; Ọ dị mfe ihicha.
1) Mgbasa ozi: Mbipụta ihuenyo silk, ihe osise, mbadamba ihe ngosi.
2) Owuwu na ihe ndozi: Ibé akwụkwọ a na-achọ mma maka n'èzí na n'ime ụlọ, nchekwa nchekwa.
3) Ụgbọ ala & Ụgbọ ala: Ihe ndozi ime ụlọ nke ụgbọ ala, ụgbọ oloko, ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri.
4) Akụrụngwa: Ngwongwo ụlọ ọrụ, kabinet kichin, kabinet ụlọ ịsa ahụ.
5) Ngwa ụlọ ọrụ: Ngwaahịa thermoformed, injinia nchekwa gburugburu ebe obibi.
6) Ndị ọzọ: bọọdụ ịkpụzi, ihe akaebe nke mmiri mmiri, akụrụngwa wart, efere nkebi ọkụ niile.